सावधान ! यी खानाहरु खाँदा मानिसको तत्काल मृत्यु हुन्छ | Science InfoTech	सावधान ! यी खानाहरु खाँदा मानिसको तत्काल मृत्यु हुन्छ
भोजनमा अनेक पोषक तत्व हुन्छन् जो शरीरको विकास गर्दछन्, त्यसलाई स्वस्थ राख्दछन् र शक्ति प्रदान गर्दछन्। सही भोजन नहुँदा नै मानिसको शरीरमा रोग निम्तन्छ । विरोधी भोजनले रोग निम्त्याउँछ । एक आपसमा तत्वहरु जुधेपछि रोग निम्तिन्छ । तसर्थ, मानिसले खानामा सचेतता अपनाउन सक्यो भने धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ । अझ, कतिपय खानाहरु यस्ता हुन्छन् की, त्यस्ता खानाहरु एकै पटक मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेमा तत्काल मृत्यु नै पनि हुन्छ । के संग के खानेकुरा संगसंगै भोजन गर्नुहुँदैन , जानकारी थाहा पाई राखौ ।
कालिज, तित्रा, मयुरको मासु ऐरनको तेल (क्यास्डर्ड वैल) मा पकाएर खानुभयो भने तत्काल मृत्यु हुनसक्छ । त्यसोभएन भने पनि उसले त्यो दिनबाट मानसिक रोगको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो खाना खादा लिभरले तुरुन्तै काम गर्छ छोड्छ । एकदमै छोटो समयमा मानिसको मृत्यु हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा उपचार असम्भव जस्तै हुन्छ ।
शुद्ध च्याउ र गाउँ घरमा पालेको खसी वा कुखुराको मासुसँगै खाइयो भने मानिसको ४५ मिनेटभित्र मृत्यु हुन्छ ।
गाउँघरतिर लामो समयसम्म बोसो राखेर भुटुनको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । तर, मांशहारी चरा तित्रा, रुपी, बकुल्ला, मयुरको मासु सँुगुरको बोसोमा पकाएर खाइयो भने २/३ घन्टा भित्रमा नै मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा केही समय हुने भएकाले उसलाई तत्काल बान्ता गराएर उसले खाएको चीज बाहिर निकाल्न सकिन्छ । त्यसपछि ननु पानी खुवाएर डाइरिया गराउनुपर्छ । त्यसपछि, उसलाई सहज बनाउनको लागि घिउ र दुध फिटेर खुवाउनुपर्छ ।
आयुर्वेद विज्ञ डा. वि.पि तिम्सिनाको भिडियो अन्र्तवार्ता हेर्नुहोस् ।